गणेशजीको टाउको अर्थात् Art of Thinking | Everest Times UK
स्मरण रहोस्– राजेश खन्नाले आफ्नो स्थान ओगट्दा पनि राजेन्द्र कुमार खासै पीडित देखिएनन किनभने उनको बुझाइ राजेशको जस्तो नकारात्मक थिएन । उनको बुझाइ जहिल्यै सकारात्मक रह्यो । एक अन्तरवार्तामा उनी भन्छन्– म गइसकेको जीवनलाई चिहानको रूपमा लिन्छु, जो अब कहिल्यै फर्कनेवाला छैन । त्यसैले पछाडि होइन अगाडि हेरेर बाँच्ने खालको मान्छे हुँ म ।
विगतमा जे भए पनि मलाई केही फरक पर्दैन । नभन्दै राजेन्द्र कुमारले आफ्नो सारा लोकप्रियता गुमाएर पनि खुसीसाथ बाँचेको देखियो । पछि उनी एक नम्बरका कलाकार त भएनन् तर डाइरेक्टर भने भए । राजेन्द्र ‘नाम’, ‘लभ स्टोरी’जस्ता लोकप्रिय फिल्मको प्रोडक्सन गरी चर्चामै रहन सफल पनि भए न कि राजेश खन्नाजस्तो पीडित ।
फिल्ममा असफल भएपछि राजेन्द्र कुमारले राजेश खन्नाले जस्तै पिएर जीवन सिध्याएनन् बरु पीएचडी गरेर आफूलाई तिखार्नतिर लागे किनभने उनको जीवनप्रतिको बुझाइ कहिल्यै नकारात्मक रहेन । यस अर्थमा भन्नुपर्दा राजेश खन्नालाई उनकै अबुद्धिले बर्बाद गर्‍यो, स्वाहा पार्‍यो । राजेन्द्र कुमारलाई भने उनको आफ्नै बुद्धिका कारण फिल्मी असफलतापश्चात् पनि सफल जिन्दगी दियो । पुनः अबुद्धि भनेको अरूमाथि दोष थुपार्ने परिपाटी हो भने बुद्धि भनेको आफ्नै कमीकमजोरी चिनेर अघि बढ्नु हो । जस्तो कि राजेन्द्र कुमारले गरे ।
यो सन्दर्भलाई अर्को कोणबाट हेरौं । राजेश खन्ना र राजेन्द्र कुमार दुवै आफ्ना जमानाका सफलतम कलाकार थिए । कालान्तरमा दुवै आ–आफ्ना उचाइबाट खसेर नराम्ररी धराशायी भए । यो भयङ्कर पीडाबाट दुवैजना गुज्रन बाध्य भए । कामको चापले गर्दा गतिलो साससमेत फेर्ने फुर्सद नभएकाहरु एकाएक बेरोजगार बन्न पुगे ।
त्यसपछि मनभित्र अनन्त अशान्ति र बाहिर पट्यारलाग्दो समयको आक्रमणबाट भाग्न राजेश खन्नाले रक्सीको सहारा लिए । रक्सीले पनि भुलाउन नसकेको अशान्तिले उनलाई विस्तार–विस्तार सधैंको लागि बर्बादीतिर लग्यो । असफलताको सिकार त राजेन्द्र कुमार पनि भएकै हुन् । सुरू–सुरूमा उनको मनमा पनि अशान्तिको तुफान थियो भने बाहिर अत्यासलाग्दो समय । तर उनले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरे ।
व्यस्त हुँदाका दिनमा गर्न नसकिने काम फुर्सदमा जति पनि गर्न सकिने हुन्छ । भयङ्करभन्दा पनि भयङ्कर अवस्थाको पनि सकारात्मक उपयोग हुनसक्छ । उनले भावको होइन बुद्धिको प्रयोग गरे अर्थात् आफैसँग सकारात्मक प्रश्न तेस्र्याए— यस्तो विकराल अवस्थामा म के–के गर्न सक्छु ? प्रश्नले जवाफ खोजेर ल्यायो, पीएचडी गरेर आफ्नो घटेको उचाइ भरपाइ गर्ने ।
अर्को कुरा, म हिरो पो रहिन तर प्रोड्युसर त बन्न सक्छु, डाइरेक्टर त हुन सक्छु । भन्न परोइन– राजेश खन्ना नकारात्मक अवस्थाका कारण आफूलाई धिक्कार्दै मरे तर राजेन्द्र कुमारले यही अवस्थामा टेकी आफ्नो उचाइलाई कायमै राखे । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राजेशलाई अबुद्धिले मा¥यो भने राजेन्द्रलाई बुद्धिले जोगायो ।
प्रसङ्ग फेरौं । गणेशजीका दुई पुत्र पनि छन्– शुभ र लाभ । यी विम्बबाट भन्न खोजिएको कुरा के हुन् भने जहाँ बुद्धि हुन्छ, त्यहाँ शुभ हुन्छ, लाभ हुन्छ । माथिको प्रसङ्गमा राजेन्द्र कुमारलाई त्यस्तै भएको थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ कसरी नकारात्मक घटनालाई सकारात्मक अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने ?
एकपछि अर्को प्रश्न गरेर । याद राख्नुहोस्– जब हामी अप्रिय घटनाको चंगुलमा फस्छौँ हाम्रो मनमा कुनै पनि सकारात्मक प्रश्न आउँदैन, केवल नकारात्मक जवाफको बाढी आउँछ । यस्तो अवस्थामा नकारात्मक वाक्यहरु तँछाड–मछाड गरी उपस्थित हुन्छन् ।